Iran | Ratopati
अमेरिकालाई आणविक सम्झौतामा फर्काउनु इरानको मुख्य चासो होइनः खमेनी access_timeपुस २४, २०७७
एजेन्सी । अमेरिकालगायतका विश्वका शक्ति राष्ट्रले इरानसँग सन् २०१५ मा गरेको आणविक सम्झौतामा अमेरिकालाई फिर्ता गर्नु इरानको चासोको विषय नभएको इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्ला अली खमेनीले शुक्रबार बताएका छन् । जो बाइडेनले जनवरी २० मा सपथ ग्रहण गरेपछि अमेरिक...
इरानको आणविक सम्झौता जोगाउन ईयूको यस्तो तयारी access_timeपुस २१, २०७७
एजेन्सी । युरोपेली संघ (ईयू) ले मंगलबार ईरान आणविक सम्झौतालाई भङ्ग हुन नदिन आफ्नो प्रयासलाई ‘दोब्बर पार्ने’ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । तेहरानले युरेनियम प्रशोधन प्रक्रियालाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउन थालेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आणविक हतियार नियमनकारी...
इरानको समर्थनमा बोल्यो रुस access_timeमंसिर २८, २०७७
एजेन्सी । रुसले इरानका परमाणु वैज्ञानिकको हत्या विश्वमा अशान्ति फैलाउनका लागि गरिएको जनाएको छ । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लेभरोभले इरानको एक सरकारी सञ्चारमाध्यामलाई अन्तरवार्ता दिनेक्रममा सो दाबी गरेका हुन् । उनले भने,‘ रुसले उनको हत्या यस क्षेत्रमा अशान्ति पैदा गर्...
इरानमा कोरोनाका कारण एकैदिनमा अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु access_timeअसोज २६, २०७७
एजेन्सी । इरानमा सोमबार कोरोनाभाइरसका कारण एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार मात्रै २७२ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार हजार २०० सङ्क्रमित थपिएका छन् । अरु कतिपय देशहरुमा झैं इरानमा पनि कोर...
इरानमा कोरोनाबाट एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु access_timeअसोज २५, २०७७
एजेन्सी । इरानमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी २५१ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिमा सादत लारीले विगत २४ घण्टामा मृत्यु हुने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५१ पुगेको र...
अमेरिकाद्वारा इरानविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा access_timeअसोज ६, २०७७
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानी अधिकारीहरु र संस्थाविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाएको घोषणा गरेको छ । इरान विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघमा सहमति नजुटे पनि अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । इरानी रक्षामन्त्री र भेनेजुएलाका राष्ट्रप...
‘इरानले अमेरिकालाई उचित जवाफ दिनेछ’ access_timeअसोज ५, २०७७
एजेन्सी । इरानले फेरि एकपटक अमेरिकाको दादागिरीलाई उचित जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ । इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले सो चेतावनी दिएका हुन् । सोमबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रुहानीले भने– ‘इरानले अमेरिकाको दादागिरीलाई उचित जवाफ दिनेछ ।&rsq...
इरानसँग १० गुणा बढी युरेनियम रहेको तथ्य खुल्यो, अब के गर्दैछ तयारी ? access_timeभदौ २२, २०७७
एजेन्सी । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौता (मापदण्ड) विपरित १० गुणाभन्दा बढी युरेनियम भण्डार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक एजेन्सीले इरानले सम्झौताविपरित १० गुणाभन्दा बढी युरेनियम संकलन गरेको जनाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईईए)...
इरान वार्ता गर्न तयार access_timeसाउन ५, २०७७
एजेन्सी । तेहरानले आफ्ना छिमेकी तथा अरब क्षेत्रका मुलुकहरूसँगको मतभिन्नतालाई वार्ताद्वारा समाधान खोज्न तयार रहेको इरानी अधिकारीले बताएका छन् । इरानले मतभिन्नतालाई सुल्झाउन खाडी मुलुकहरूसँगको वार्ताका लागि तयार रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्बास मौसवीलाई उद्ध...
इरानमा तालिबानको कार्यालय छैन: इरानी विदेश मन्त्रालय access_timeसाउन ५, २०७७
एजेन्सी । इरानले अफगानिस्तानमा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तालिबान संगठनको कार्यालय इरानमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयले सो कुराको जानकारी गराएको हो । इरानी उपविदेशमन्त्री अब्बास अरागाचीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको बताइएको छ । उनले भनेका छन्&ndas...
इरानको कुर्दिस्तानमा आक्रमण, २ जनाको मृत्यु access_timeसाउन १, २०७७
तेहरान । इरानको पश्चिमी प्रान्त कुर्दिस्तानमा “प्रतिक्रान्तिकारी समूह”को आक्रमणमा दुई व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै एक जना घाइते भएका छन् । इरानी समाचार संस्था इर्नाले बुधबार राति आतंकवादी आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । इरानी क्रान्तिकारी ग...
ईरानमा फेरि अर्को रहस्यमय घटनाः एकैपटक ७ वटा जहाजमा आगलागी ! access_timeअसार ३१, २०७७
एजेन्सी । ईरानमा बुधबार एकैपटक ७ वटा जहाजमा आगलागी भएको छ । ईरानका सरकारी सञ्चारमाध्यामहरुका अनुसार दक्षिणी ईरानको बुशहर बन्दगाहमा रहेका ७ वटा जहाजमा एकैपटक आगलागी भएको हो । स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन संगठन प्रमुखकाअनुसार आगो नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ । तर क्षतिको ...
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न वारेन्ट जारी access_timeअसार १५, २०७७
एजेन्सी । इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि गिरफ्तारका लागि वारेन्ट जारी गरेको छ । इरानले ट्रम्पको गिरफ्तारीका लागि इन्टरपोलसँग सहयोग मागेको छ । इरानको यो कदमलाई जनवरीमा बगदादमा गरिएको ड्रोन हमलासँग जोडिएर हेरिएको छ । जहाँ इरानका कुदस सेनाका प्रमुख कासिम ...
‘ईरान अहिले सबैभन्दा खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ’ access_timeअसार १४, २०७७
एजेन्सी । ईरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले इरानले अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । आइतबार टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति रौहानी सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रपति रौहानीले कोभिड–१९ को महामारी र अमेरिकाले लगाएको कडा प्रतिबन्धका कारण ई...
इरानविरुद्ध हतियारमाथिको प्रतिबन्ध अवधि थप गर्न अमेरिकी प्रस्ताव access_timeअसार ९, २०७७
संयुक्तराष्ट्र संघ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरान विरुद्ध लगाइएको हातहतियार खरिदमाथिको प्रतिबन्धको अवधि अरु थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाले सन् २०१९ मा साउदी अरेबियास्थित तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा भिषण हमला इरानले गरेको आरोप ...
अमेरिकी कदमको इरानद्वारा निन्दा access_timeअसार ४, २०७७
तेहरान । अमेरिकाले सिरियामाथि लागेको प्रतिबन्धले सिरियाली समस्यालाई थप दुःख दिने भन्दै इरानले त्यसको निन्दा गरेको छ । सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदसँग काम गर्ने सिरियाली कुनै पनि कम्पनीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सो कार्यको विरोध गर्दै इरानले सो घटनाल...
इरानमा २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमितकोे सङ्ख्या झण्डै ३ हजार access_timeजेठ १९, २०७७
एजेन्सी । इरानमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमितको सङ्ख्या विगत २४ घण्टामा करिब ३ हजार पुगेको छ । इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कियानुस जहानपुरलाई उद्धृत गरी राष्ट्रिय समाचार संस्था आइआरएनएले समाचारमा लेखेको छ, ‘इरानमा सोमबार कोरोनाभाइरस सङ्क्रम...
इरानमा कोरोनाबाट १ लाख २९ हजार सङ्क्रमित, ७ हजारको मृत्यु access_timeजेठ ८, २०७७
एजेन्सी । इरानमा बिहीबारसम्ममा एक लाख २९ हजार ३४१ व्यक्ति कोरोनाभइरस (कोभिड–१९) बाट सङ्क्रमित भएका छन् भने सात हजार २४९ को मृत्यु भएको छ । इरानको राष्ट्रिय टेलिभिजनले जनाए अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार ३९२ रहेका छन् भने यो अवध...